Slate ၏အသုံးပြုမှုကဘာတွေလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Slate ၏အသုံးပြုမှုကဘာတွေလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-06-12 မူလ:ဆိုက်ကို
Slate သည်ကျောက်တုံးများဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပြန်လည်သင့်အားပြန်လည်သင့်မြတ်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်အသွင်သွပ်သောကျောက်ဖြစ်ကြ၏။. Tသူသည်မူလကျောက်တုံးသည် Argillaceous, Silty သို့မဟုတ်ကြားနေ tuff ဖြစ်သည်အိပ်ရာအထည်အလိပ်။ Slate ၏အရောင်သည်၎င်းတွင်ပါ0င်သောအညစ်အကြေးများနှင့်ကွဲပြားသည်။မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော DIY ကိရိယာများပါဝင်ပါဝါကားvကိရိယာများ ing,စိုစွတ်သောကျောက်စက်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
1. အားသာချက်များနှင့်Dအဖြစ် isalavantages အဖြစ်Dဂရုစိုက်တတ်သောMအိမ်သူ့အေ
slate ၏ထူးခြားသောမျက်နှာပြင်သည်ဒီဇိုင်းဆွဲသောဒီဇိုင်းများနှင့်အရောင်များကိုကြွယ်ဝစေသည်။ အုတ်နှင့်အုတ်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်ဒီဇိုင်းသည်ရေချိုးခန်းကိုထူးခြားစေသည်, ၎င်းသည်ရေချိုးခန်းကိုထူးခြားစေသည်။ ၎င်းသည် slate brick ၏ဗေဒခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးလူများကိုအထူးခံစားချက်တစ်ခုပေးသည်။
Slate သည်အလွန်အရေးကြီးသည့်နောက်ထပ်အဓိကအားသာချက်တစ်ခုရှိသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လူအများအပြားသည်လူအများအပြားလမ်းလျှောက်နေသောစီးဆင်းမှုဒေသများရှိ Slate Flowing ကိုတပ်ဆင်ရန်အကြံပြုခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အချို့သောပိုင်ရှင်များသည်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်ဟုတိုင်ကြားလိမ့်မည်‘အသွားအလာမြေပုံ’slate ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ. Tဦး ထုပ်သည်လှည့်ပတ်နေသောမကြာခဏလူတို့သည်လှည့်လည်ကြည့်ရှုရန် slate ကို0တ်ဆင်ခြင်းနှင့်တွင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ဤသည်မမှန်ပါ။ ဒီအကြောင်းပြချက်‘အသွားအလာမြေပုံ’ကုသသောပေါင်းစပ်မှန်သည်စာချုပ်Slate BRICTS အပေါ် ed ။ ဒီအထူးကြမ်းပြင်အကွက်၏စောင့်ရှောက်မှုကိုသိရန်ကုသသောဒြပ်ပေါင်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်စာချုပ်မည်သည့်အမျိုးအစားသည်မည်သည့်ပုံစံနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသိရန်။
Slate Brad သည်သဘာဝတရားကိုအဓိကအားဖြင့်မညီမျှသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်iအခါအန္တရာယ်များအန္တရာယ်iစိုစွတ်သော S စိုစွတ်သော။
ဟုတ်ပါတယ်, slate အုတ်မစုံလင်ကြဘူး။ အကယ်. ပျောက်ကင်းအောင်မလုံလောက်ပါက Slate Brick မှေးမှိန်ရန်လွယ်ကူသည်။ ရေအမြောက်အမြား၏ထိုးဖောက်မှုသည် slate brick ၏အသွင်အပြင်ကိုရှေးဟောင်းတွင်ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်စိုစွတ်သောဒေသများရှိ slate ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် သာ. ကောင်း၏။ အချို့သောနေရာများတွင်ရေချိုးခန်း area ရိယာကဲ့သို့အခြားပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်စာချုပ်အစားသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောကုသမှုဒင်းနားဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာချုပ်ပုံမှန် ed ။ ထို့အပြင်သူတို့ကအက်ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မည် အချိန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ။
Slate Stage အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ed ။ Slate Stone သည်အထွေထွေအတုအယောင်ဖုံးအုပ်ထားသောပစ္စည်း,နှင့်အပူ insulator ကိုသုံးခြင်း, Slate ခေါင်မိုးသည်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ လုံခြုံစိတ်ချရသောဂေဟစနစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုကြာရှည်နိုင်သည်။
Slate ကြမ်းပြင်sဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာချုပ်အပြင်ပန်းကြမ်းပြင်, အတွင်းကြမ်းပြင်နှင့်အပြင်ဘက်နံရံများအတွက် ed ။ slate floors များကိုပုံမှန်အားဖြင့်စင်္ကြံများ, မြေအောက်ခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်များတွင်အိမ်ပြင်တွင်ထားလေ့ရှိသည်။ မိုးလုံလေလုံ slate ကြမ်းပြင်သည်ကြာရှည်ခံ။ အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်လှပသည်။ အိမ်ပိုင်ရှင်များသည်အတွင်းပိုင်းကိုထူးခြားသောပတ်ဝန်းကျင်သို့အလှဆင်နိုင်သည်နှင့်slate ။ မိုးလုံလေလုံ slate ကြမ်းပြင်အားဖြင့်ပွတ်နိုင်ပါတယ်ကျောက်ပေါ်လီယိုကြိတ်စက်(သို့မဟုတ်ကျောက် polishing kit,ကျောက် polishing ကိရိယာများစသည်တို့ကိုစသည်တို့) သို့မဟုတ်၎င်းသည်သဘာဝပုံစံနှင့်အရောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အရောင်သည်အလွန်ကြွယ်ဝသည်, အဓိကအားဖြင့်အဝါရောင်အနီ, အနီရောင်အနီရောင်, အနီရောင်အနီရောင်, အနက်ရောင်အနီရောင်, အနက်ရောင်, အနက်ရောင်အနီ, အဖြူရောင်အနက်ရောင်, အပြင်ဘက် slate ကြမ်းပြင်သည်ကျပန်း slate သို့မဟုတ် slate tiles ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျပန်း slate သည် arc, လှေကားထစ်များနှင့် palallellogram ကဲ့သို့သောပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။
ရာသီဥတုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုခံနိုင်ရည်ကြောင့် slate သည်မကြာခဏဖြစ်သည်စာချုပ်အမျိုးမျိုးသောလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ရှုခင်းများစီမံကိန်းများတွင် ed ။ မကြာခဏစာချုပ်ပြင်ပနံရံများနှင့်ခြံဝင်းများပင်အပါအ0င်ရေကူးကန်များနှင့်ပတ်0န်းကျင်များကိုပြင်ဆင်ရန်လမ်းကြောင်းများချမှတ်ရန် ED ။ Slate Stage လည်း ဦး လည်းဖြစ်နိုင်သည်တက္ကသိုလ်ရိုးရာနှင့်ခေတ်သစ်စတိုင်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း, စမ်းရေတွင်းများစေရန် ed ။
Slate ၏သဘာဝနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများသည်၎င်း၏လျှောက်လွှာကို ပိုမို. သဘာ0ပတ်0န်းကျင်နှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်။
wenzhouMIbond Machinery Co. , Ltd. သည်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်အစပြုသူများအတွက်ပန်းပုကိရိယာအပါအဝင်ပိုလန် grinder,ခရီးဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းစာနယ်ဇင်း,ကြိတ်ဆုံကျောက်ဝင်းစသဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး0န်ဆောင်မှုကောင်းသည်။ ဝမ်းသာစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းနာယကရန်.
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော DIY ကိရိယာများ ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ စိုစွတ်သောကျောက်စက် ကျောက်ပေါ်လီယိုကြိတ်စက် ကျောက် polishing kit ကျောက် polishing ကိရိယာများ အစပြုသူများအတွက်ပန်းပုကိရိယာ ပိုလန် grinder ခရီးဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းစာနယ်ဇင်း ကြိတ်ဆုံကျောက်ဝင်း